हामीलाई बहुमतले पेलियो भने परीणाम के आउँछ भनेर म अहिले भन्न सक्दिन् : जोशी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ९ असोज । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनको लागि दश बुँदे सहमति कोशेढुंगा सावित भएको सुनाउँदै सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जोशीले दश बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुदुरपश्चिम प्रदेशको उदाहरण दिए ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले दश बुँदे सहमतिअनुसार बैठकसमेत नबसेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामी विद्यान महाधिवेशन गर्दैछौं, अनि हामी विद्यान किन मान्दैनौं ? पार्टीको निर्णय किन मान्दैनौं ? हामीले बैठकमा अपानी कार्यान्वयन किन भएन भनेर प्रश्न गरेका छौं । अपानी कार्यान्वयनमा बुझाई किन फरक फरक ? भनेर पनि हामीले सोधेका थियौं । जिल्ला जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने कुरा ढिला भैसक्यो, अहिलेसम्म प्रदेश कमिटीको बैठक किन बसेन ?’
उनले जिल्लामा अलग अलग गुटको बैठक बस्नु शोभनीय नभएको टिप्पणी गरे । उनले हिजोको बैठकमा आफूले निकास दिनुहोस भनेर नेतृत्वलाई ध्यानाकार्षण गराएको स्मरण गराए । उनले पार्टीमा आफूहरुलाई बहुमतले पेलियो भने परीणाम के आउँछ भनेर अहिले भन्न नसक्ने पनि बताए । उनले पार्टीभित्र आएका समस्या समाधान गर्न नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरु चुपचाप सहेर नबस्ने पनि चेतावनी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आजको लागि तोके ११ इजलास
काठमाडौं, १० कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज (बुधबार) ११ इजलास तोकेका छन् ।
सेटिङ भत्काउँदै प्रधानन्यायाधीश जबरा
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुँदै आएको सेटिङ भत्काउँदै
मुख्यमन्त्रीकोे छिनोफानो आज
काठमाडौं, कार्तिक १० । अल्पमतमा परेकी बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज प्रदेश सभाको बैठकमा
काठमाडौं, कार्तिक १० । पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली
प्रधानन्यायाधीश जबराले पदत्याग गर्नुपर्छ : नेपाल बार एशोसिएसन (विज्ञप्तीसहित)
काठमाडौं, ९ कार्तिक । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ ।
काँग्रेस प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा
काठमाडौं, ९ कात्तिक । नेपाली काँग्रेस प्रधानन्यायाधशि चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा देखिएको छ । जबराको
श्रीमान् जबरा न्यायको ढुकढुकी रोकिन नदिनुहोस् !
दीपेश केसीः दार्शनिक सुकरातले राज्यको विद्यमान प्रणालीविरुद्ध बोलेकोले हेमलक विष पिएर मर्नुपर्ने सजाय सुनाइयो ।
काठमाडौं, १० कात्तिक । राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी माघबाट जग्गा वितरण प्रक्रिया सुरुआत गर्ने भएको
प्रधानन्यायाधीश जबराले सुरु गरे एकल इजलास
काठमाडौं, १० कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले एकल इजलास सुरु गरेका छन् । अरु
डोटी, १० कात्तिक । एक हप्तादेखि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा औषधिको अभाव देखिएको छ । बाढीपहिराले